Momba ny fiaramanidina rehetra sy ny dokam-barotra amin'ny pejy Download
voavaha Momba ny fiaramanidina rehetra sy ny dokam-barotra amin'ny pejy Download
1 taona 9 volana lasa izay #830 by ingjen
Tiako ny hampiseho ireo sarin'ny fiaramanidina maimaim-poana, rehefa aseho ireo saripika anatiny. Mahafinaritra sy mahaliana ny fihinanana, fa ny "cliquables" dia tiana ho toy ny ivelany.
1 taona 9 volana lasa izay #831 by rikoooo
Misaotra ny mizara ny hevinao, manaiky anao aho ary amin'ny ho avy dia hametraka bebe kokoa fonosana sy VC screenshots
Azoko atao ny mihaino soso-kevitra hafa.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: ingjen
1 taona 9 volana lasa izay #832 by ingjen
Tanx. Ny alin'ny zoma lasa teo tany Norvezy. Amin'izao fotoana izao dia mivezivezy amin'ny tendrombohitra 6000 aho any amin'ny distrikan'i North West ao Norvezy.
1 taona 9 volana lasa izay #847 by groba
Salama, vaovao aho eto ary niezaka nametraka ny B727 ho P3D v4, fa tsy mandeha ny installer.
Mila solona manokana ho an'ny Win10 ve aho?
1 taona 9 volana lasa izay #848 by N00b
Hi Groba, mety miezaka ny mihazakazaka amin'ny fomba amam-panao fifanarahana. maro FSX, FSX-SE, Ary P3D Tsy manohana ny fandresena 10 ny fametrahana ny auto-installer.
1 taona 7 volana lasa izay #936 by DRCW
Tadidio fa P3D V4 mavesatra dia ampiana amin'ny alàlan'ny lahatahiry ao anaty lahatahiry misy anao. Nataon'i Lockheed izany raha tsy maintsy mamerina mamerina ilay programa ianao, tsy ho very ny fampidiranao fanampiny ary tsy maintsy manomboka. Indraindray, ny installer dia mety tsy hanova ny fampidinana anao. Mandehana any amin'ny antontan-taratasinao ary tadiavo ny rakitra misy marika (Prepard 3D v4 Add-ons "ary sokafy. Tokony hanana fipetrahana fiaramanidina eny ianao. Adikao izany ary apetaho amin'ny pejinao Airplanes izay misy ao anaty sim simika. Tokony hiseho ho toy ny fiaramanidina ao anatin'ny programa